Special : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
क्रिश्चियन सेवाकाइ र आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दा
[ 33 ] July 1, 2014	| Jagadish Pokhrel
जगदीश पोखरेल किन अधिकांश सेवामूलक संस्थाहरु क्रिश्चियन बाहुल्यता भएका देशहरुबाट मात्रै छन् ? किन अरुलाई वास्ता नभएको कुरा क्रिश्चियनहरूले मात्रै अति वास्ता गर्नुपर्ने? कतै यो विश्वभरका सबै संस्कृति मास्ने अनि सेवाकै नाममा आफ्नो पेट भर्ने नियोजित ग्र्याण्ड डिजाइन त होइन? यी प्रश्नहरु आम जनमानसको निम्ति सामान्य प्रश्नहरु हुन्, धेरैका मनमा धेरैपटक उठेका होलान् । हुन […]
[ 38 ] June 27, 2014	| Loknath Manaen
कनफिउज । जीवन तलमाथि, तलमाथि । चर्च हलमा प्रवेश । छेउकी टिन एजर नानीको अभिवादन र मुस्कान । धन्यवाद । तलमाथि भइराको जीवनमा राहत । सत्यको र शान्तिको खोजीमा फनफनी । ए बाबा रिङ्गाटो लागिसको फनफनीले । खानुकै कुरा । जागिर खाने, तलब खाने, डलर खाने, गउत खाने, पचाङ्ग खाने, तुङ्गबा खाने, खाँदै नखाने, अलिअलि […]
[0] April 25, 2014	| Resham Sunuwar
शुद्ध हृदय हाम्रो जीवनमा हृदयको समस्यासँग कति जुधीरहेका छौं होला । मानिसको जीवनमा उसले भोग्नुपर्ने सबै भन्दा ठुलो विषय नै उसको हृदयको समस्या हो । बाइबलमा धेरै चोटी मानिसको हृदयको सम्बन्धमा चर्चा गरेको पाइन्छ । येशूले पनि हृदयको शुद्धताको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ । के हाम्रो हृदय शुद्ध छ? के हाम्रो हृदय पवित्र छ? हामीले […]
आत्मिक सुख्खापनमा परमेश्वरको झरी
[ 1 ] April 6, 2014	| Resham Sunuwar
आत्मिक सुख्खापनमा परमेश्वरको झरी कतिचोटी हामी जीवनमा आत्मिक सुख्खापनाबाट भएर गएका हुन्छौं । पानी नभएको ओबानो बाँझो जमीनजस्तै हाम्रो जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुमा हामी सुख्खा बनेर आफुलाई गा-हो अवस्थामा पाउन सक्दछौं । कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मिक जीवनका सुख्खापनबाट उठेर परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ । “हे परमेश्वर, तपाइँ मेरा परमेश्वर […]
[ 1 ] February 15, 2014	| Resham Sunuwar
असल परमेश्वर जीवनमा कतिचोटी हामीलाई अप्ठयारो अनि गारो परीरहेको बेला के परमेश्वर साँच्चै असल हुनुहुन्छ होला त? भनेर हामी प्रश्न. गर्दछौं । दुःख कष्ट पर्दा हामी अलमलमा पर्दछौं । हामीले आशा गुमाउँदछौं । हामीले परमेश्वरमा त्यति भरोसा पनि गर्दैनौं । उहाँको शरणस्थानको पनि त्यति सरोकार राख्दैनौं । निश्चय पनि यो हाम्रो लागि चुनौतीपुर्ण कुरा […]
अखमिरी रोटीको चाड
[0] February 1, 2014	| Resham Sunuwar
अखमिरी रोटीको चाड हामी कतिचोटी आफुलाई बन्धनमा पाउँछौं । स्वतन्त्रता र छुटकाराको अनुभव भईरहेको हुँदैन । हाम्रा जीवनमा पापका डोरीहरुले बाँधीरहेको अवस्थाहरु हुँदछन् । अनि विभिन्न दुष्टता, घमण्ड, अशुद्धता र भ्रष्टताले गाँजेर जीवनमा नमिठो समयहरुमा गुज्रीरहेका हुन्छौं । हामी विभन्न देखावटी अनि घमण्डीले फुलेर परमेश्वरदेखि टाढो भईरहेका हुन सक्दछौं । परमेश्वरमा हामी हाम्रो हृदयका खमीर […]
पहाड हटाउन सक्ने रायोको दाना जत्रो विश्वास
[0] January 13, 2014	| Resham Sunuwar
पहाड हटाउन सक्ने रायोको दाना जत्रो विश्वास हाम्रा जीवनमा धेरै प्रकारका समस्या र चुनौतीहरु आउँदछन् । कति हाम्रा प्रार्थनाका उत्तरहरु आउँदैनन । कतिचोटी हामी असफल हुन्छौं । हाम्रा जीवनमा थुप्रै पहाडहरुले छेकीरहन्छन् । बाधा दिन्छन् । अनि किन यस्तो भएको होला ? भन्ने मनमा प्रश्नं.हरु उठदछन् । मनमा शंकाहरु जन्मदछन् । हामीमा भएका […]
निश्चय पनि आज ख्रीष्टमसको दिन खुशी र आनन्दसँग रमाएका छौं । किन हामी आनन्द हुन्छौं? किन हामी खुशी हुन्छौं? किनकि आज भन्दा २०१३ वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशू मुक्तिदाताको जन्म भएको थियो । उहाँको जन्मले सारा विश्वमा आनन्द र खुशीको ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निश्चय पनि ती परिवारका सदस्यहरु अनि […]
साधारण जीवनको असाधारण प्रभाव
[3] December 24, 2013	| Kamal Adhikari
दुइ हजार वर्षअगि एउटा दुर्गम गाउ“मा एउटा निम्न स्तरकी स्त्रीबाट प्राकृतिक नियम विपरीत एउटा बालकको जन्म भयो । उहाँ अर्को गाउँमा हुर्कनुभयो जहाँ उहाँले सिकर्मीको रूपमा काम गर्नुभयो । उहाँ गरिबीमा बाँच्नुभयो । आफू बाँचेको मुलुकको सीमाना उहाँले जीवनमा एक पटक मात्र पार गर्नुभयो । उहाँसँग न धनसम्पत्ति थियो न ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले गर्ने कार्यहरू […]
[0] December 22, 2013	| Resham Sunuwar
यी दिनहरुमा हामीले येशूको जन्म अथवा ख्रीष्टमसको उत्सवमा रमाईरहेका छौं । ख्रीष्टमसको कुरा गर्दा यो जहिले पनि येशूको जन्मको कुरासँगै जोडिएको छ । येशूको जन्मले नै हामी मानव जातिले उद्धार पाउने बाटो भेट्टाउन सकेका छौं । उहाँमा शान्ति अनि आनन्द पाएका छौं । येशू मानिसको रुपमा हाम्रो लागि उद्धार गर्नलाई यस पृथ्वीमा नआउनुभएको भए हाम्रो […]
[0] December 22, 2013	| Kamal Adhikari
येशूको ऐतिहासिकतामाथि शंका गर्दै दार्शनिक बेट्राण्ड रस्सेलले लेखे, “ऐतिहासिक रूपमा ख्रीष्ट अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा शंकास्पद छ, यदि हुनुहुन्थ्यो भने पनि हामी उहाँको विषयमा केही पनि जान्दैनौं ।” ऐतिहासिक साक्षीहरूलाई जाँच गरेर हेर्दा रस्सेलको यस्तो भनाइ वास्तवमै हाँस्यास्पद देखिन्छ । नयाँ नियमका सत्ताइस ओटा पुस्तकहरू मात्र होइन यहूदी सर्न्दर्भहरू र सेकुलर (गैर-यहूदी र गैर-ख्रीष्टियान) सर्न्दर्भहरूले […]
संसारभरि नै हर्षोल्लासका साथ् मनाइने यस उत्सवले… पास्टर टंक सुबेदी
[0] December 12, 2013	| NC Reporter
सारा मानव जातिको पाप पखाल्नका निम्ति बलिदान हुनुभएका हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शुभजन्मोत्सव अर्थात ख्रीष्टमस हाम्रो नजिकै आइसकेको छ। संसारभरि नै हर्षोल्लासका साथ् मनाइने यस उत्सवले यहाँहरुमा प्रभुबाटको खुशी, आनन्द र भाइचारा ल्याओस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यस उत्सवका अवशरमा आफन्त, परिवार, छरछिमेक तथा साथीसंगी संग खुसियाली मनाउने कुराहरुको साथमा हाम्रा प्रभु येशुलाइ अझ नजिकबाट […]